Ra’isal wasaare Cali Khalif Galeydh Oo Geeriyooday (Tariikh-diisa) | Goobsan Media Inc
Home Xulashada Ra’isal wasaare Cali Khalif Galeydh Oo Geeriyooday (Tariikh-diisa)
Magaalada Jigjiga, ee xarunta u ah ismaamulka Soomaalida Itoobiya, waxaa maanta ku geeriyooday Cali Khaliif Galaydh – oo ahaa siyaasi caan ah – xilal kala duwanna kasoo qabtay Soomaaliya.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee Cali Khaliif lagu xasuusto waxaa ka mid ah inuu Ra’iisul Wasaare ka noqday dowladdii ku meel gaadhka ahayd ee lagu soo dhisay magaalada Carta ee dalka Jabuuti, taasoo uu madaxweyne ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan.
Marxuumka oo sida lasoo tabiyay labo maalmood ku xanuunsanaa Jigjiga wuxuu ku geeriyooday da’da 78.
Waxbarashadiisii dugsiga sare wuxuu degmada Sheekh ku dhammeystay sanadkii 1962-kii. Heerka aqoonta maaddiga ah – oo uu qeybo ka mid ah kusoo qaatay jaamacado dibadda ku yaalla – wuxuu ka gaadhay ilaa darajada PhD, wuxuuna bare ka noqday Soomaaliya.
In Somaliland, ururada samafalka iyo hey’adaha jimciyada quruumaha ka dhaxeysa ay ka hawl galaan sidii mashaariic horumarineed looga fulin lahaa gobolada Sool, Sanaag iyo Buuhoodle iyo In ciidamada hubeysan ee Khaatumo la qarameeyo, oo Somaliland ay yeelato ciidan qaran oo suga xuduudaha, jirintaanka iyo danaha Somaliland.